New Zealand: 49 Qof Muslimiin Ah Oo Masaajid Lagu Dhex Laayey | Gacanlibaaxnews
New Zealand: 49 Qof Muslimiin Ah Oo Masaajid Lagu Dhex Laayey
March 15, 2019 - Written by C M
Christchurch-(GLN): Nin hubaysan, ayaa xabbad la dhex qaaday dad ku sugnaa masaajid ku yaalla magaalada Christchurch ee dalka New Zealand, halkaa oo ay ku dhinteen 49, halka ay tiro kale ay dhaawacyo halis ahi soo gaadheen.
Si toos ah ayaa internet-ka looga daawanayay sida ay u socdeen weerarradii masaajidka ku yaalla magaalada Christchurch, waxaana baahinayay nin uu magaca u qoran ahaa Brenton Tarrant.
Muuqaal naxdin leh ayaa laga arkayay isagoo si aan kala sooc lahayn u tooganaya rag, haween iyo carruur ku wada sugnaa gudaha masaajidka Al Noor.
Tirada dhimashada ayaa hadda lagu sheegay 49 ruux.
Shakhsigan waxa uu horay internet-ka usoo dhigay qoraallo ku saabsan fikrado xagjir ah.
Ra’isul Wasaaraha New Zealand “Weerarka Masaajidka waa mid Argagixiso”Dad lagu laayay labo masaajid oo New Zealand ku yaallaBooliska ayaa sheegay in ay gacanta ku hayaan saddex ruux, isla markaana nin dhowr iyo 20 sano jir ah lagu soo oogay dacwad dil ah.
Maanta oo Jimce ah, Ra’iisul wasaaraha Australia Scott Morrison waxa uu xaqiijiyay in nin lagu qabtay New Zealand uu yahay muwaadin Australia u dhashay.
Mr Morrison ayaa ninkaas ku tilmaamay “qof xagjir ah oo argagixiso ah”, wuxuuna intaas ku daray in dowladda Australia ay New Zealand ka caawin doonto baaritaannada.
Weerarka oo toos loo daawanayay
Ninka laga arkayo muuqaalka ayaa watay wax u muuqday qalab kaamiro oo tayo fiican leh, kuwaaoo uu toos ugu baahinayay weerarka uu ka fuliyay bartamaha magaalada Christchurch.
Meelaha laga daawanayay muuqaalkiisa waxaa ka mid ahaa barta xiriirka bulshada ee Facebook, iyadoo ay dadku arkayeen sawirro naxdin leh.
Booliska ayaa isku gedaamay masaajidka la weerarayNinka weerarkan loo heysto waxaa gaarigiisa laga maqlayay hees astaan ah oo lagu yaqaanno in lagu soo kulmin jiray ciidamadii qaran jaceylka Serbia, kuwaasoo loogu yeeri jiray magaca Chetniks xilligii lagu guda jiray dagaalkii Bosnia ee socday intii u dhaxeysay 1992-kii ilaa 1995-kii.
Heestaasi waxay amaani jirtay hoggaamiyihii Bosnia iyo Serbiya kasoo jeeday ee lagu magacaabayay Radovan Karadzic, kaasoo markii dambe lagu helay dambiyo ay ka mid yihiin xasuuq iyo dambi dagaal.
Qoriga uu watay ninka weerarka geystay waxaa ku qornaa magacyada raggii lagu helay dambiyada la xiriiray inay laayeen dadka Muslimiinta ah iyo qaxootiga.
Warbaahinta dalka Australia ayaa soo tabiyay in warqado laga helay ninkan ay muujinayaan in Masjidka Al Noor uu calaameystay saddex bilood ka hor.